Basel Airport Ntufe & Ụgbọ mmiri Basel Airport
Ọrụ ịkwọ ụgbọala nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị oke ala ma dị mma site na A ruo B. Ma ọdụ ụgbọ elu na-enyefe site n'ọdụ ụgbọ elu nke taxi Basel ma ọ bụ ọrụ limousine na Basel, anyị na-arụ ọrụ anyị n'ụzọ dị irè ma bụrụ ọnụ.
Kpọtụrụ anyị site n'ụdị arịrịọ anyị ma ọ bụ kpọọ anyị + 41 78 861 35 50.
der Fahrdienst Basel maka ọrụ limousine nke ọma bụ Basel na Zurich, n'ọdụ ụgbọelu na-ebufe ụgbọ ala taxi basel na Basel. Maka ihe omume, fairs (Art Basel, Baselworld), Nzukọ (WEF Davos,), oge pụrụ iche, njem nzuzo ma ọ bụ azụmahịa. Ị na-ahapụ n'isi ụtụtụ? Na-abịa n'oge chi ma ọ bụ nwee nnukwu akpa? Mgbe ahụ, ị ​​nọnyeere anyị, na Nyefee ụgbọelu Zurich na Basel dị nnọọ mma, nke anyị Ụgbọ ala Basel Airport bụ mgbe niile. anyị Ụgbọ mmiri nke Basel Ugbo ala nwere ike ịnabata mmadụ 7 na akpa gị niile. Rite uru site na ugwo oru anyi na ego di ala.
Naanị gbakọọ ego gị
Ọrụ anyị: Ọdụ ụgbọ elu site na taxi Basel Airport,limousine ọrụ
Ọrụ Limousine & Ọdụ Ụgbọ Mmiri Basel Taxi - Anyị na-akwọ ụgbọala kacha mma!
Nabata na ọrụ nnyefe anyị na Basel! Ị na-eleta obodo ahụ, na-agafe ma ọ bụ na-achọ ka e nyefee gị na Limousine Service Basel ma ọ bụ ụgbọ ala taxi dị na Busel ngwa ngwa? Maka nke a na ọtụtụ ndị ọzọ, ndị ọkwọ ụgbọala anyị, ndị enyi anyị, nakwa nke a naanị ụgbọ mmiri dị. Anyị na-eburu gị n'ime obodo, dịka ọmụmaatụ na ọdụ ụgbọ elu dị na Basel Baselworld na Art Basel. Anyị dị maka ndị ahịa azụmaahịa yana ndị mmadụ n'otu n'otu. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ide akwụkwọ ọrụ limousine anyị na Basel na gburugburu ya, kamakwa maka njem gaa n'obodo ndị ọzọ eg Davos Akuko Economic World na nke anyị Ọrụ WEF Davos, Kpọtụrụ anyị ugbu a ma chebe onwe gị naanị limousine na Basel na Zurich!
Ọrụ Limousine Basel - Site na Basel ruo ọdụ ụgbọ mmiri Zurich
Basel Kwa afọ ọtụtụ nde ndị ọbịa si Switzerland, Germany ma ọ bụ Gulf States bịa. Ọ bụghị nanị na ha na-ede akwụkwọ nde otu nde n'ime abalị na obodo ahụ, ha chọkwara ka ha na-agagharị. Site na A ruo B na obodo nke atọ kasị ukwuu na Switzerland, dịka ọmụmaatụ, site na Basel ruo ọdụ ụgbọ elu Zurich, nke a bụ ihe ọdụ ụgbọ mmiri dị na Taxi Basel nwere ike ime. A ụgbọala si na nkwari akụ gaa n'ebe ọ bụla na-aga na obodo ma ọ bụ ịkwaga n'obodo ọzọ. Ma ọ bụ ọbụna obodo dị iche! Ihe ndị a bụ ihe omume, nke ọtụtụ ndị ọbịa nke obodo anyị na-ede akwụkwọ ọrụ limousine anyị na Basel. Ndị njem nleta na ndị na-azụ ahịa karịsịa na-eji ụgbọ elu nke ụgbọ elu nanị anyị na Basel ma ọ bụ dekọọ ọrụ limousine anyị n'oge ha nọ na Basel. Ma kwa, ọ bụrụ na ịchọrọ njem a na-agaghị echefu echefu, dị ka ihe atụ nke ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ agbamakwụkwọ, mee nke ọma na ọrụ limousine anyị na Basel! Anyị na-agafe na transferservice-basel.ch ma na-enye ọrụ ụgbọ ala na-enweghị oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị chụga gị na cantons ndị ọzọ ma ọ bụ mba, nke a abụghị nsogbu anyị!
Oge ezumike maka ọrụ limousine / ụgbọ elu taxi Basel Airport
Otú ọ dị, anyị na-anọgide na mbụ na Basel na obodo ókè, mgbe nile, n'ezie ebe 23 square kilomita: Anya isi ị na-ebi Basel ma ọ bụ na-emefu oge ụfọdụ ebe a, e nwere a dịgasị iche iche nke ihe n'ihi na a ntinye akwụkwọ na anyị limousine ọrụ Basel. Basel bụ obodo nke atọ kasị ukwuu na Switzerland ma dịka ihe dị otú ahụ nwere ọtụtụ ihe na-enye ọtụtụ ndị mmadụ. Nke a na-emetụta ma ndị bi, ma ndị ọbịa ahụ. Ndị na-aga obodo, ma n'ihi na ahịa ma ọ bụ obi ụtọ, nwere ike na-aga na anyị taxi Basel Airport ọrụ dị ka ndị ikpeazụ nzọụkwụ nke mbata anyị mara mma obodo. Karịsịa, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị elu, ndị elu ma ọ bụ ndị ahịa si mba ndị ọzọ chọrọ ịgbazite limousine n'etiti anyị, n'ihi na ha nwere ekele maka ezi uche na ọrụ naanị. N'ihi ya, e nwere ihe atụ, ndị ozi, bankers, agadi oru ma ọ bụ na-ekwuchitere mba onye iku a limousine na anyị na Basel na-eji ya dị ka nanị Airport tagzi. Ụlọ ọrụ ndị a maara nke ọma dịka Novartis, Roche na Swiss International Airlines nọkwa na Basel, nke, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, na-enye nleta ahịa ahịa dị elu na Basel. Ị ga-achọ ịgbazite limousine na Basel maka ihe omume azụmahịa ma ọ bụ njem nlegharị anya na Basel? Maka njem azụmahịa, ị nwere ike ịgbazite ụgbọala kwesịrị ekwesị n'aka anyị n'oge kwesịrị ekwesị na ebe kwesịrị ekwesị! O doro anya na nke a na-emetụtakwa ihe ndị mmadụ na-agba, dị ka Basel na-eleta ndị mmadụ n'otu n'otu (ma ọ bụrụ na ị bịarute Zurich, ị nwere ike ide akwụkwọ ụgbọelu anyị na Airport Transfer Zurich). Lee ya Symphonyna Art Museum Basel, nke Messe Basel ma ọ bụ, site n'ụdị Omenala, Basler Fasnacht na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enweta. Na mgbakwunye na ihe ndị a na-eme njem nleta, a na-enwekwa isi ihe na ndụ nke ụtụ taxi dị na Basel na-anọchite anya echiche kachasị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ limousine anyị dịkwa maka agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ụbọchị agbamakwụkwọ. Kpochapụ Baseline Service Basel, na ụdị.
Limousines Service Basel - Ụgbọ ala anyị na obodo canton
Kedu ihe ị ga - eji chọọ ịtụ ụtụ isi ụgbọ ala dị mma? N'ihi na ịchọrọ ịgagharị ma ọ bụ njem obodo site na Basel, n'ụgbọala dị elu, na ndị ọkwọ ụgbọala dị oke ọnụ? Nke a bụ kpọmkwem otú anyị VIP Shuttle Basel, nke anyị na-ekwe nkwa site na ugbo ala na anyị limousine ọrụ. Ọrụ anyị na-arụ ọrụ ndị ọzọ na-adabere n'ogo buru ibu na ọkwa ndị ọzọ nke ndị na-emepụta ụgbọala kasị mma. Iji hụ na njem nchebe ma dị jụụ, anyị na-adabere na mma ụgbọala na-eme na Germany: Anyị na gị dị ka ọrụ limousine gị na Basel, ị gaghị agafe ebe ị na-aga. Anyị chọrọ ka obi ruo gị ala n'obodo anyị, ebe ọ bụla ọ ga-aga. Nke a bụ ụzọ dị mma isi dị iche na taxis, n'ihi na ọ bụghị naanị na ịkwalite gị, anyị bụ ọrụ limousine. N'ihi ya, anyị na-arụ ọrụ na ụgbọala ndị dị elu, nke nwere ike ịdabere ma dị elu:
• Mercedes E klas
• ụgbọ okporo ígwè Mercedes E
• Mercedes Viano (oche 8)
• VW Passat ala
Ụgbọ ala ndị anyị na-arụ na limousine na-adaba ma maka nnyefe nke ndị mmadụ n'otu n'otu, dị ka ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ maka njem dị iche iche. Maka mkpa ọ bụla anyị nwere ụgbọala kacha mma "na mmalite". Anyị na-eburu ndị ahịa anyị ebe niile ma buru ha n'ebe niile, nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị dị na transferservice-basel.ch.
Akwa njem ụgbọ ala Basel Airport - Ọ bụghị site na Basel ruo ọdụ ụgbọ mmiri Zurich
Ọ bụghị mgbe nile ka ị ga-abụ "naanị" Airport Airport Basel - VIP anyị ga-ebuga gị ebe ọbụla ịchọrọ ya. Were ya na obughi nani nleta Basel, ma Switzerland n'ozuzu ya. Ị ga-achọ ka a chụga gị n'ọdụ ụgbọelu Zurich na ọdụ ụgbọelu gị na Basel ma ọ bụ ka a na-ekpo gị na Bern? N'ezie, anyị na-enyekwa ndị ọrụ ụgbọ ala a na ụgbọala anyị. Ma, ọ bụghị naanị nke ahụ, n'ezie, ọrụ ọrụ limousine anyị na-arụ ọrụ n'ụwa nile, ịchọrọ ịga na 70km naanị Freiburg na Germany, Stuttgart ma ọ bụ Munich. Liechtenstein, France, Ịtali ma ọ bụ France bụ ebe ndị ị ga-achọ maka ozi ọrụ limousine anyị.
Na anyị nanị limousines ị gaghị atụ uche ihe ọ bụla, ma ọ bụ nkasi obi ma ọ bụ nchekwa. Ihe kpatara ya: Ọ bụghị nanị site na nghọta ha ka a na-ejide ọkwọ ụgbọala anyị niile, kamakwa site na ụzọ ịkwọ ụgbọala ha maara. Nke a apụtaghị na ị gaghị eme nhọpụta gị na oge. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị maara usoro iwu okporo ụzọ na obodo ukwu na njem dị anya na mba dị iche iche ma mee ka ị gaa ebe ị chọrọ ka ọ bụrụ na ọ bụ n'enweghị nsogbu.
Ndị ọrụ ụgbọ elu dị na Basel Airport